Filtrer les éléments par date : samedi, 24 août 2019
Iray volana taorian’ny nijoroan’ny Antenimieram-pirenena vaovao, nanaovany fivoriana in-droa miantoana, dia ny fivoriana manokana tanterahina ny talata faharoa aorian’ny nanambarana ofisialy ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka, ifidianana ireo mpikambana amin’ny birao maharitra sy ireo vaomiera samihafa, ary koa ny fivoriana tsy ara-potoana nanoloran’ny Praiminisitra ny fandaharanasa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny fanjakana, sy nandihana ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny mpanohita, tsy mbola nandingana ny tokonan’ny lapan’i Tsimbazaza ny depiote isany Rasolomampionina Hasimpirenena (IRD), voafidy tao amin’ny Distrikan’i Fandriana, Faritra Amorin’i Mania, sy Raveloson Ludovic Adrien dit Leva (Tsy miankina), voafidy tao amin’ny Distrikan’i Mahabo, Faritra Menabe.
Samy voatazona am-ponja izy ireo ; Rasolomampionina Hasimpirenena, voasaringotra amin’ny raharaha tany mikasika ny « Villa Elisabeth » fonenan’i Pr Zafy Albert tamin’ny naha filoham-pirenena azy. Raharaha heloka bevava samihafa kosa no mahavoarohirohy an’i Leva.
samedi, 24 août 2019 17:21
Maevatanana: Hakarika ho 100MWh ny herinaratra azo avy amin’ny masoandro vokarina
Nitsidika ny foibe famokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro teto Maevatanana ny filoha Andry Rajoelina ny zoma 23 aogositra 2019, ary nidinika tamin'ireo tompon'andraikitry ny orinasa izay misahana izany. Teo no nanambarany fa hakarina ho 100MWh ny herinaratra vokarina ao mba hahaleotena amin'ny sehatry ny angovo i Maevatanana.
samedi, 24 août 2019 17:12
Maintirano: Nisokatra ny « Foara Melaky Mahalomba »
Andiany faha-5 ity « Foara Melaky Mahalomba » tontosaina eto an-drenivohitry ny faritra Melaky nanomboka omaly zoma 23 aogositra ity.
Diabe namakivaky ny tanàna narahina hetsika zava-kanto no nisantarana ny lanonana.
samedi, 24 août 2019 17:09
Peace Corps: Miisa 35 no miasa aty Madagasikara
Ny Peace Corps dia mandefa mpilatsaka an-tsitrapo amerikanina hiasa aty Madagasikara mandritra ny roa taona miaraka amin'ireo vondrona ifotony mba hiatrehana ireo fanamby maika eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny fambolena ary ny fanabeazana.
Miisa 35 ireo mpilatsaka an-tsitrapo amerikana an’i Peace Corps ankehitriny no miasa eo amin’ny sehatry ny fambolena eny anivon’ny fiarahamonina, any amin'ny faritra 13 eto amin'ny firenena.
Miara-miasa ary mitovy andraikitra amin’ny Malagasy ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo amin’ny famokarana sakafo ara-pahasalamana sy ny fanjarian-tsakafo eny amin'ny fiarahamonina misy azy.
samedi, 24 août 2019 17:07
FJKM: Manomana ny andiany faha 2 "Rodorodo Haona Fi 2019"
Ny foibe FJKM dia manomana indray ny andiany faha 2 an'ilay "Rodorodo Haona Fi 2019" izay atao ny faha 30 sy 31 oktobra ary 01-02 Novambra ho avy izao, izay atao eny amin'ny village Voara Andohatapenaka.
Homanina araka izany ny fanentanana aram-pilazantsara sy seho an-tsehatra, ny fitilina ireo aretina maro, fampihofanana sy famelabelaran-kevitra.
Ankohatran'ny Tsena sy varotra fampirantiana dia eo ihany koa ny kilalao sy fifaninana samihafa.
samedi, 24 août 2019 11:37
Kitra: Fifidianana filohan’ny Federasiona Malagasy
Tanterahina ao Ifaty-Toliara anio 24 aogositra 2019 ny fifidianana izay ho filohan’ny Federasiona malagasy ny baolina kitra. Miisa dimy ireo kandida mifaninana, dia Arizaka Rabekoto Raoul Romain, Mohamad Abdilah Aboudou, Andriamiasasoa Doda Nirimboavonjy, Rasoamaromaka Herilalaniaina ary Rakotomamonjy Neypatraiky André.
Izay voafidy eo no handimby ny toeran’i Ahmad, izay voafidy ho filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina amin’ny baolina kitra (CAF). Ny Comité de Normalisation pour la Fédération Malagasy de Football no napetraky ny federasiona iraisam-pirenena hitantana vonjimaika ny rafitry ny baolina kitra malagasy nanomboka tamin’ny novambra 2018, rehefa tsy nety tontosa ny fifidianana filohan’ny FMF nokarakarain’ny vaomiera mahaleotena teo aloha.
Miara-tontosaina amin’ity anio ity koa ny fifidianana ireo mpikambana ao amin’ny komity mpanatanteraky ny Federasiona malagasy ny baolina kitra.